मृ’गौला पी’डित भूमिसरालाई अमेरिका बस्ने नेपालीहरु गरे सहयोग । – Yuwa Aawaj
मृ’गौला पी’डित भूमिसरालाई अमेरिका बस्ने नेपालीहरु गरे सहयोग ।
चैत्र २, २०७७ सोमबार 272
काठमाडौं : रोल्पाकाे माडी गाउँपालिका- ६ की भूमिसरा घर्ती मगरको उप’चारमा सहयोगका लागि अमेरिका बस्ने नेपालीहरूले नगद संकलन गरी हस्ता’रण गरेका छन्।
विगत लामो समयदेखि दुवै मृ’गौलाले काम गर्न छाडेर उप’चार गराइरहेकी भू’मिसराका लागि झण्डै ८० हजार नगद संकलन भएकाे हाे । अमेरिकाको टेक्सा’समा बस्दै आएका नेपाली कमल थापा, याशिका बाँठा र इन्द्रेणी क’ल्चर एशोसिएसनको पहलमा
संकलित ७९ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ बि’रामी भू’मिसरालाई हस्ता’न्तरण गरिएको हो । गायत्री नेशनल हस्पिटल, घो’राहीमा उपचाररत भूमि’सरालाई सोही ठाउँमा पुगेर उक्त रकम हस्ता’न्तरण गरिएको थियो । अमेरिका बस्ने कमल थापाको पहलमा एनिता राई, निरा निरौला, भावना भण्डारी, यशोदा
चौलागाई, हरि कोइराला, सुरेन्द्र राम, विष्णु कँडेल, भिमसेन प्रधान, आशा क्षेत्री, रमा पोखरेल, अशोक यादव, प्रभा विष्ट, यशोदा थापा र इन्द्रेणी कल्चर एशोसिएसनको पहलमा दिलिप सुवेदी, देव शर्मा, रुपक खड्का, गोकर्ण दाहाल,
सुशील क्षेत्री, जीवराज बुढा, हेमन्त गेलाल, जीवन गोषी, तेज अर्याल, नेत्र पाण्डे, जनक रानाले सहयोग गरेका थिए।
दुवै मृ’गौलाले काम गर्न नसकेपछि विगत लामो समयदेखि भूमि’सराले प्राकृतिक उपचार गराउँदै आएकी छिन् ।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कारण निरन्तर उप’चार गर्न समस्या परेकाले उपचारमा सहयोग गर्न बिरामी भू’मिसराले अनुरोध समेत गरेकी छिन्।
उनले भनिन्, ‘नियमित उपचारका कारण मैले आ’र्थिक अ’भाव झेल्नुपरिरहेको छ। यहाँहरुको सहयोगले उपचारमा केही सहज हुने नै छ। साथै थप उपचारका निम्ति थप रकम आवश्यक पर्ने भएकोले सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’
Prevखगेन्द्र संग्रौला भन्नुहुन्छ : निर्मला पन्तको ब’लात्का’रपछि ह’त्यामा गृहमन्त्री ‘बादल’को संग्नता छ ।
Nextसगरमाथा आरोहणका लागि बहराइनका राजपरिवार सदस्यसहित १६ जना नेपाल आइपुगे ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : सुरुङमार्ग बनाउन ५० अर्बको ठेक्का सम्झौता !
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको आईपीओ आउँदै !
अभियान्ता बोगटीको पहलमा हाम्रो टिम नेपालद्वारा डोटिको एक अ’पाङ्ग परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग ।